Ingqalutye ayinakuma kutsalo lweemarike kwaye ithengwa nguFitbit | Iindaba zeGajethi
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, xa kungekho mntu wacinga malunga nokonwaba iwotshi eya kusazisa ngalo lonke ixesha ngezaziso esizifumeneyo, abafana abavela kwiNqabana beza eKickstarter kwaye bahambisa isixhobo esivumela ukuba senziwe ngexabiso elifikelelekayo. Ingqalutye yaba sisalathiso kwimarike ye-smartwatch, kodwa khange ikwazi ukuziqhelanisa nexesha langoku, apho iimodeli zangoku zisinika umbala opheleleyo, kwaye zenze imisebenzi efanayo neyezangaphambili, ngexabiso elifanayo neLitye , ethe kwiminyaka yamuva yonyusa ixabiso leemodeli zamva nje ezisungulwe kwintengiso.
Ukuba yinkampani edityanisiweyo kwimarike, abantu abaninzi bothuka ukuba iKickstarter iqhubeke nokumvumela ukuba enze amaphulo okufuna inkxaso kwiimodeli zakhe ezintshaNjengoko sibonile kulwaziso lokugqibela lwenkampani, isazisa ukuba ngaphandle kokuba iphumelele, sukuyivumela inkampani ukuba iqhubeke nokusebenza ngokuzimeleyo kwintengiso. I-Fitbit isebenzise ithuba lobuthathaka bePebble ukuyithenga kwaye ikakhulu isebenzise inkqubo yayo yokusebenza, inkqubo yokusebenza eya kuthi incede kakhulu ekuphuculeni ujongano kunye nokunxibelelana kweemodeli zeFitbit.
Njengoko kuxeliwe liXwebhu lezeMali, ukuthengwa kuqinisekisiwe. Kodwa iFitbit ayizukusebenzisa kuphela inkqubo yokusebenza, iyakuxhamla kwilungelo lobunikazi elibhaliswe ngegama leNtsika. Ukuba i-Fibit ibinomdla kuphela kwinkqubo yokusebenza, ngekungabizi kakhulu ukuyila kwasekuqaleni kunokuthenga i-Pebble ngenani elingayi kudlula kwi-40 yezigidi zeedola.
Ngokweli posi, Umgca welitye lewotshi uya kuyekiswa. Into esiyaziyo kukuba iimodeli zamva nje ezithiwe thaca kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo ziya kuqhubeka zithunyelwa kubathengi okanye ukuba inkampani iya kuyirhoxisa imveliso kwaye iyeke ukuyithumela kubo bonke abo babheja kwiimodeli ezintsha zeThebble, ezinye iimodeli ebambelele kwixa elidlulileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » SmartWatch » Ingqalutye ayinakumelana nokutsalwa kweemarike kwaye ithengwa nguFitbit
Inyani yile yokuba andazi kwaye andilazi ilitye, kodwa ngokoluvo lwam eyona nto banokuthi bayenze kukutshabalalisa yonke into, inkqubo yokusebenza, amalungelo awodwa omenzi wechiza, njl njl njl kwaye nokuba uFitbit ubenza kwasekuqaleni kunye nezigidi ezingama-40, zisonjululwe.
Ndiyathemba ukuba ababaniki nje ngokwaneleyo okanye ngaphantsi ukuhlawula amatyala abo ukuba banayo, kwaye bangayisebenzisa loo mali ukwenza enye into kwakhona kwaye baye kuFitbit, nokuba yintoni na le ndingaziyo nayo .. Kodwa kubonakala ngathi yimbali yokusoloko….